Ummada Soomaliland Gobi Waa Inaga " Ex Wasiir Xuseen Deyr Oo Soo Bandhigay Sida Shacabka Somaliland Dhexdooda Uwada Nool Yihiin Isu Jecel Yihiin Jiritaankoodana U Ilaashadaan
Tuesday February 16, 2021 - 20:34:13 in Wararka by Sanaag Office
"GOBI WAA INNAGA!"
Ummadda Jamhuuriyadda Somaliland waa ummad uu ALLAH (sxwt) ku manaystay caqli toolmoon, garasho togan, dhaqan suuban iyo xigmad dadnimo. Waa ummad uu Rabbi awood u siiyey inay si dhab ah u xilliyaan mushkilad kasta oo dhexdooda timaada.
Ummadda Somaliland waa ummad dhaqan u leh wada-xaajood, wada-tashi, isku-tashi, isku tanaasul, is-qancin iyo in mudnaanta koowaad la siiyo halka ay ku jirto danta dadka iyo dalku. Astaamahan dhaqan wanaag ee ummadda Somaliland u gaarka ah iyo bisaylka ummadnimo ee ay leeyihiin ayaa u suurto geliyey inay ka maarmaan fara gelinta shisheeye iyo in ay xalka ka raadiyaan meelo aanay dantoodu ku jirin.
Jamhuuriyadda Somaliland waa QARAN HANAQAADAY oo ku guulaystay inuu dadkiisa u horseedo nabad iyo degenaansho; dal-dhismay iyo horumar muuqda iyo shacab walaalo ah oo dan qudha wada keh. UmmaddaSomaliland waa shacab leh hal ujeedo iyo hadaf midaysan isla markaana ku wada nool xasilooni iyo is qadarin.
LABA-WAJIILAYNTA BEESHA CAALAMKA:
Waxaynu ku jirnaa Xilli ay LABA-WAJIILAYNTA BEESHA CAALAMKU marayso heerarkii ugu xumaa!!! Waxaynu ku jirnaa Xilli ay Beesha Caalamku xaq-darro cad iyo eex aan garowsho lahayn ka galayaan QARAN GUULAYSTAY oo ku guulaystay inuu dadkiisa u horseedo Nabad, Degenaansho, Horumar, Dimuqraadiyad iyo Dawlad Wanaag, taasoo ay Jamhuuriyadda Somaliland ku sifowday 30-kii sano ee ugu dambeeyey!!
Waxaynu ku jirnaa Xiilli la isku abaal-marinayo Dawlad Xumada, Xasuuqa, ku Xad-gudubka Xuquuqda Aaadamaha, Colaadaha iyo Musu-maasuqa xad-dhaafka ah taasoo ah astaamaha lagu garto Waddamada Guul-darraystay.
Laba-wajiilaynta Beesha Caalamka keliya waxa TUSAALE CAD inoogu filan FARQIGA DAWLADNIMADA ee u dhexeeya labada dal ee ay midna Beesha Caalamku cadaadinayaan (Somaliland), midka kalena ay kool-koolinayaan (Soomaaliya), hadii ay noqoto xagga nabada iyo xasiloonida, ilaalinta iyo ku dhaqanka sharciga iyo kala dambaynta, Dawladnimada, Doorashooyinka, Dimuqraadiyada, iwm.
Haddaba, haddii aynu nahay ummadda JSL, ogsoonow waxa la inala rabaa in Dalkeenu noqdo QARAN GUUL-DARRAYSTAY!! Laakiin anigu muwaadin ahaan waxaan si kalsooni leh u leeyahay: "UMMADDA SOMALILAND, GOBI WAA INNAGA!"
Ummadda GOBTA ahi waa kuwii ku wada nool wanaag, nabad iyo xasilooni; waa kuwii u tudha maatadooda iyo inta jilicsan, waa kuwii isku tanaasula ee aan gartooda iyo arrimaha xasaasiga ah ee iyaga dhexyaala aan u gacan gelinin shisheeye iyo cid aan u tudhayn!
Haddaba, waa in aynaan iloobin Ahaanshaheena-Ummadnimo iyo ku Adkaanshaheena Qarannimadeena. Waa in aynu mar walba xasuusnaano Xilligii adkaa iyo waayihii qallafsanaa ee Shalay ina soo maray!!
YEYNAAN ILOOBIN wixii aynu Naf iyo Maalba u hurnay si aynu u Xaqiijino QARANKAA HIR-GALAY ee aynu maanta wada hadhsanayo.
(FIIRO GAAR AH: Erayga GOB waa erey tilmaamaya sifooyin badan oo uu Aadamuhu leeyahay oo ah xagga wanaaga iyo hufnaanta ummadnimo ama qofnimo. Waana sida uu ereygu ugu jiro qoraalkaygan kooban !)